တရားနှင့် ဂါထာတော်များ Archives - Page 15 of 16 - Latest Myanmar News
နှုတ်လွန်အောင် မပြောကြနဲ့ ရန်လိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်သူကမှ “ငါမိုက်တယ်”လို့ မထင်ဘူးတဲ့။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင် “ငါမိုက်လို့ ဖြစ်ရတယ်”လို့ ဘယ်သူမှ မစဉ်းစားဘူးတဲ့။ ငါတော်တယ်လို့ပဲ ထင်ကြတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မတည့်လို့ စိတ်ဝမ်းကွဲကြရင် ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာတွေ တခြားပြဿနာတွေ ပိုကြီးလာမယ်ဆိုတာ နားမလည်ကြဘူး။ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားကြဘူး။ အိမ်မှာ မိသားစုထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အလျှော့မပေးဘူး။ အငြင်းပွားကြတယ်၊ ရန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် အသံတွေဟာ ကျယ်သထက်ကျယ်လာတယ်။ ရန်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အသံကကျယ်လာတာပဲ။ “ငါမှားတယ်”လိုိ့ ဘယ်သူမှ မထင်ဘူး။ ငါလုပ်တာ မှန်တယ်။ သူမှားတယ်ပဲ တွက်တယ်။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင် ပြဿနာက ဘယ်တော့မှ မပြေဘူးတဲ့။ ဒီတင်ရပ်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ပြဿနာတွေ နောက်ဆက်တွဲ အများကြီးလာလိမ့်မယ်တဲ့။ မြတ်စွာဘုရားကတော့ ဒီလိုဟောတာ။ ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝမှာ သတိထားဖို့၊ … Read more
စိတ်ညစ်ရင် ကုသိုလ်တရားကိုပဲ အာရုံပြောင်းပေးလိုက်ပါ
စိတ်ညစ်ရင် ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲ အာရုံပြောင်းပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံး အဆိုးလောကဓံကို ဘယ်သူမှ မကြုံချင်ကြဘူး… ဒီတော့ ကြုံလာရင် စိတ်ညစ်မယ်…ပုထုဇဉ်ပဲ ညစ်ပေါ့… အေး…ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ညစ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ကြဖို့ပဲ… စိတ်ညစ်စရာလည်းညစ်…တစ်နေ့တာ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာလည်း လုပ်ပေါ့…အဓိက,ကတော့ စိတ်ညစ်စရာ ရှိပေမယ့် တစ်နေ့တာ ကိုယ်လုပ်ရမယ့် ဒါန သီလ ဘာဝနာဆိုတဲ့ ကုသိုလ်တရားအလုပ်လေးတွေ ပျက်မသွားဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်နော်… ဒီတော့ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးကတော့ ကုသိုလ်တရားနဲ့ပဲ အာရုံပြောင်းလိုက်… ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး Unicode စိတျညဈရငျ ကုသိုလျတရားနဲ့ပဲ အာရုံပွောငျးပေးလိုကျတာ အကောငျးဆုံး အဆိုးလောကဓံကို ဘယျသူမှ မကွုံခငျြကွဘူး… ဒီတော့ ကွုံလာရငျ စိတျညဈမယျ…ပုထုဇဉျပဲ ညဈပေါ့… အေး…ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ ညဈပွီးရငျတော့ ကိုယျလုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျကွဖို့ပဲ… စိတျညဈစရာလညျးညဈျ…တဈနတေ့ာ ကိုယျလုပျစရာရှိတာလညျး လုပျပေါ့…အဓိက,ကတော့ စိတျညဈစရာ ရှိပမေယျ့ … Read more
ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓ နေ့အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ကဆုန်လပြည့်နေ့ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အကြောင်းကို သိစေရန်အတွက် ဒီဆောင်းပါးကိုိ ရေးပြီး ဘုရားရှင်ကို ပူဇော်သက္ကာရ ပြုလိုက်ရပါတယ်။ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးတစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့— (၁) ဘုရားအလောင်းတော် ရသေ့သုမေဓာဟာ ဒီဘဒ္ဒကမ္ဘာမှ လေးဆူမြောက် ဂေါတမဘုရားစင်စစ် ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံ နိယတဗျာဒိတ်ခံယူတဲ့နေ့ဟာ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ (၂) ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော် သိဒ္ဓတ္ထမင်းသားလေး မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ (၃) ဂေါတမဘုရားအလောင်း ဗောဓိပင်အောက်မှာ ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့လဲ မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃) ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်တယ်။ (၄) ဂေါတမဘုရား ပရိနှိဗ္ဗာန်စံတဲ့ နေ့ဟာလဲ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု ကဆုန်လပြည့်နေ့ဖြစ်ပြန်တယ်။ ဒါကြောင့် ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် အင်မတန် ထူးမြတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါ။ … Read more
အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ပြုရမည့် အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီ
အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါ အဓိဋ္ဌာန်ပါရမီပြုပါ အားလုံးသင်ခန်းစာယူရမှာက ကိုယ့်မှာ တခါတရံ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့ အခက်အခဲ မကြုံဘူးလား? (ကြုံပါတယ် ဘုရား) အခက်အခဲဆိုရင် ဒါ စိတ်ဆင်းရဲစရာပြောတာပေါ့။ ဘာကိုပြောတာလဲ? (စိတ်ဆင်းရဲစရာကို ပြောတာပါ ဘုရား) ဖြစ်ချင်းတိုင်းမဖြစ် မကြားချင်တာကြားရ မမြင်ချင်တာ မြင်ရတာဆိုတာက ကုသိုလ်အကျိုးပေးလား၊ အကုသိုလ်အကျိုးပေးလား? (အကုသိုလ် အကျိုးပေးပါ ဘုရား) အကုသိုလ်ဆိုရင် မေတ္တာလား၊ ဒေါသမာနလား? (ဒေါသ မာနပါ ဘုရား) အဲ့ရဲ့အကျိုးပေးပြန်လာတာလေ။ အဲတော့ အဲဒါကို ဘာနဲ့ကာမလဲဆိုတော့ မေတ္တာနဲ့ပဲ ကာရမှာပေါ့။ ဘာနဲ့ ကာရမှာလဲ? (မေတ္တာနဲ့ပဲ ကာရမှာပါဘုရား) ဆရာတော်ဘုရားကြီးက “ကံကိုကွယ်တဲ့ ကံအကျိုးပေးကိုဖျက်ချင်ရင် ကံနဲ့ပဲ ဖျက်ရတယ်။” တဲ့။ ကံကို ကံနဲ့ဖျက်။ အဲတော့ မေတ္တာပေါင်းပေါ့။ အခက်အခဲရှိလို့ စီးပွားတွေကအစ ဆွဲအားနည်းတော့ … Read more